लकडाउनमा कुशको पुरोहित | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला.. लकडाउन कथा
म धादिङ जिल्लाको चरौंदीमा बस्छु । म, श्रीमती, छोरी, कान्छो छोरा-बुहारी र नाति-नातिना गरेर हाम्रो ८ जनाको परिवार छ । सुःखदुःख जीवन चलेकै छ। म सामान्य खेती किसानी गर्छु। खेतीपाती गर्नेको दिनचर्या त्यस्तै हो घर र खेतबारी । तर झण्डै डेढ महिनादेखि धेरै चीज बदलिएका छन् अनि मेरा काम पनि ।
विश्वभर कोरोना फैलियो । नेपालमा पनि आयो त्यो कोरोना । यसले अलिक बढी उमेर भएका र पहिलेदेखि नै शरीरमा रोग भएकालाई चाँडै समाउँछ भन्ने पनि सुनेको थिएँ बजारको टोले गफमा । यसैबीचमा कोरोना रोक्न सरकारले लकडाउन गर्‍यो ।
टिभीले बारम्बार कोरोनाबाट जोगिन लकडाउन पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश, समाचार दिन थाले । जेठो छोराले पनि भीडभाडमा जानु हुन्न, कुराकानी गर्दा समेत अरू मानिसबाट टाढै बस्नुपर्छ भनेर सम्झायो । हामीसँगै बस्ने कान्छो छोरा-बुहारी, छोरी, सबैले घर सल्लाह गर्‍यौं र हामी गाउँघरका मान्छेबाट टाढा बस्न थाल्यौं । हामी सबै आत्तिएका थियौं किनभने घरमा श्रीमतीलाई सुगर छ भने छोरीलाई पनि दमको समस्या छ । म पनि पूरै स्वस्थ मान्छे होइन । त्यसैले हामीले अरूलाई नछोइकन अलग्गै घरभित्रै बस्ने योजना बनायौं ।
हुन त हाम्रो घरमा पहिले पनि मान्छेहरुको त्यत्तिसारो आवातजावत हुँदैनथ्यो । तर लकडाउनपछि सबै मान्छे फुर्सदमा हुने भएकाले गफसफ गर्न एकदुई, एकदुई गर्दै मानिस आउलान् र समस्या होला भनेर हामीले घरको गेटैमा ताल्चा लगाइदियौं — न आफू बाहिर जाने, न बाहिरकालाई भित्र आउन दिने ।
कोही आए पनि गेट नखोली भित्रबाटै गफ गर्थ्यौं। फलामको डन्डी मिलाएर बनाएको गेट हुनाले गेटबाट बाहिर देख्न सकिन्छ। त्यसैले कोही आइहाले पनि हामी भित्रैबाटै कुरा गर्छौं । घरमा हामीसँग महिना दिनलाई पुग्ने खानेकुरा थियो । घर पछाडिको बारीमा हामीलाई पुग्दो तरकारी पनि लगाएका छौं । त्यसैले खानाका लागि समस्या थिएन, अहिलेसम्म छैन । त्यसैले बाहिर निस्किने खास जरुरत परेन ।
हाम्रो समाज जे गर्दा पनि अरूको कुरा काट्नुपर्ने । घरको मूलढोकामा ताल्चा लगाएकोमा धेरैले नानाथरी कुरा काट्न थालेछन् । केहीले भनेछन् — कत्ति न ताल्चा लगाउनुपरेको, ताल्चा लगाएपछि कालबाट जोगिन सकिन्छ जस्तो ।
समाजमा थरीथरीका मान्छे, थरीथरीका कुरा गर्छन् त्यसमा केही मतलब भएन ।
लकडाउन भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । बारीको तरकारी कुहिन थाल्यो । आफन्तकहाँ पठाउन पनि सकिँदैन । मेरो एक भाइको परिवार काठमाडौंमा बस्छन् । तर के गरौं तरकारी पठाउने उपाय छैन ।
लकडाउनको २० दिनसम्म म कतै पनि गइन । केही दिनसम्म कोरोनाको निकै डर लाग्यो । विश्वमा छिनछिनमा कोरोनाबाट भएको मृत्युका खबरले मन साह्रै अत्यायो । हामीलाई पनि केही भयो भने भनेर हरेक क्षण मन अशान्त भइरहन्थ्यो । तर फेरि हामी सबै परिवार घरभित्रै बसेकोले एक किसिमले ढुक्क पनि थियौं ।
पहिले बस्तुभाउ पाल्थें, अहिले घरमा बस्तुभाउ छैनन् । बस्तुभाउ भएको भए लकडाउनमा पनि घाँस काट्न र चराउन जानुपर्थ्यो होला ।
लकडाउन सुरु भएको ३० दिन जतिमा घरबाट १५-२० मिनेट टाढाको लिचीको बगैंचा जानुपर्‍यो भन्ने लाग्यो । लिचीमा फल लाग्ने बेला भएकोले अहिले विषादी हाल्नुपर्छ नभए पछि कीरा लागेर खानै नहुने हुन्छ भनेर कसैलाई नछोईकन बारीसम्म पुग्न भनेर घरबाट निस्किएँ ।
गाउँमा मान्छेहरु यताउता छरिएर बसेका थिए । अरूबाट टाढा बसेका थिएनन् । देख्दै विरक्त लाग्ने । म हिँड्दै थिएँ । मेरो हिँडाइको चालले गाउँलेले मलाई चिनेछन् । एक ठाउँमा पाँच-छ जना बसेका थिए । त्यहाँबाट आवाज आयो —कता जान लागेको ? कति पछि बाहिर देखिनुभयो ? आउनुहोस्, एकछिन गफगाफ गरौं ।
मलाई समस्या भयो । मलाई लाग्यो उनीहरुलाई म अरू मान्छेभन्दा टाढा बसेको कुरा थाहा रहेनछ । यसबीचमा म दिनैपिच्छेजसो पुग्ने, मेरो घरभन्दा ६-७ घर परको साहिंलो भाइकोमा पनि पुगेको थिइनँ । ऊ पनि मेरोमा आएको थिएन । मेरो घरबाट ४ किलोमिटर जति टाढा जेठो छोरोको राफ्टिङ कम्पनी छ रोयल बीच क्याम्प। ऊ नेपाल हुँदा त्यहीं बस्छ । पहिले ऊ दिनैपिच्छे मेरो घर आउने गर्थ्यो तर लकडाउन भएयता क्याम्पमै बस्थ्यो यता आउँदैन थियो ।
मलाई ती मानिसहरुलाई भन्न मन थियो, “अहिले यसरी सबै जना एकै ठाउँमा बस्नु हुन्न, के थाहा कसैबाट कोरोना सर्ने हो ? अरूबाट टाढै बस्नुपर्छ।” तर “धेरै जान्ने भएको” भन्लान् भनेर त्यसो भनिनँ । भनेँ, अहिले हतार छ, लिचीबारी जान लागेको ।
मलाई लाग्छ पछि पछुताउनुभन्दा अहिले नै सतर्क हुनु बेस । हामीले अहिलेसम्म पनि बाहिरका मानिसहरुसँग भेटघाट गरेको छैन । टाढैबाट देखादेख मात्रै भएको छ । मेरा दाइभाइ, आफन्तहरुसँग भने फोनमा कुरा हुन्छ । अहिलेको जुगमा फोन नभएको भए हामी के गर्थ्यौं होला ? धन्न यो फोन छ र घरमै थन्किएका बेला आफन्त तथा साथीभाइको खबर पाइन्छ । यसले हामी सबैलाई नजिक बनाएको छ ।
यसैबीच बुबाको वार्षिक श्राद्धको तिथि थियो । बाको श्राद्धको तिथिमिति अघिपछि गर्न नमिल्ने । पुरोहित बोलाउँ भने उनी थुप्रै ठाउँ गएका होलान् । कति जनालाई टीका लगाइदिएका होलान् । उनी पनि हामी जस्तै बाहिरका मानिसहरुलाई नभेटी बसिरहेका होलान् र ?
तिथिमा श्राद्ध नगरे पितृ रिसाउँछन्, घरपरिवारमा अनिष्ट होला। फेरि म जेठो छोरा । के गरुँ । दुविधा भएर माइलो भाइलाई फोन गरें । ऊ पनि पुरोहित काम गर्छ । हामी चार दाजुभाइ । म र साहिँलो धादिङमै बस्छौं । माइलो भाइ चितवन र कान्छो भाइ काठमाडौं बस्छन् । माइलो भाइसँग सल्लाह गरें। हामीले कुशको पुरोहित बनाएर श्राद्ध गर्ने निधो गर्‍यौं । घरको आँगनमा रहेको तुलसीको मठ नजिकै बसेर बाको श्राद्ध सुरु गर्‍यौं । हामीले पुरोहितलाई दुई मिटर टाढा बस्ने आसन बनाएका थियौं । अनि एउटा कुशको पुरेतको पनि स्थापना गर्‍यौं, टीका पनि तिनै कुशको पुरेतलाई लगायौं र पुरेतको हातको टीका पनि नलगाई आफैले आफ्नो परिवारका अरूलाई टीका लगाइदिएँ। बाको श्राद्धमा आफन्त, नातेदारलाई बोलाएनौं । भान्जाहरुलाई बोलाएको भए बाइक चढेर आउँथे कि के गर्थे कुन्नि ! तर हामीले कसैलाई पनि बोलाएनौँ । नजिकै रहेको साहिंलो भाइलाई पनि बोलाइनँ ।
पहिले हामी चार जना दाजुभाइ र आमा एकै ठाउँमा जम्मा भएर बाको श्राद्ध गर्थ्यौं। यस पटक हामीले बाको श्राद्ध सबैले आ-आफ्नो हिसाबले गर्‍यौं । माइला आफै पुरेत उसले चितवनमै श्राद्ध गर्‍यो । अरु दाजुभाइले घरबाट सिधा उठाएर नजिकका पुरोहितलाई दिएछन् । कोरोनाले के के गराउँदैछ ! अझै के के गराउने हो !
यो कथा बलराम सिल्वालसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।